warkii.com » Israel oo sheegtay sirta ka dambeyso xiriirka ay Carabta dhawaanahaan lasoo yeelanayaan.
Israel oo sheegtay sirta ka dambeyso xiriirka ay Carabta dhawaanahaan lasoo yeelanayaan.
Wasiirka Sirdoonka Irael Eli Cohen ayaa shaaca ka qaaday sababta ay mudooyinkaan dambe carabta u daneynayaan iney xiriir la yeeshaan Israel asigoona sheegay in arintaas aysan ku tiirsaneyn nabadgalyada Falastiin.
Eli Cohen ayaa yiri; “Ahmiyada Naftada iyo gaaska ayaa mudooyinkaan dambe hoos u dhacay, balse taas badalkeeda waxaa sare u kacday ahmiyada Tiknoolijiyada, sidaas owgeed Sacuudiga, Imaaraatka iyo dowlado kale oo carbeed waxay aad u daneynayaan iney Israel is garabsadaan, waana arin maslaxo wadaag ah”.
Wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in Israa’iil “ay ku talajirto inay horay ugu socoto qorshaheeda ah inay ku dabaqdo madaxbanaanideeda qaybo ka mid ah dhulka Daanta Galbeed iyadoo la tixgalinayo faafitaanka viruska Corona ee adduunka iyo inay ka faa’iideysato waqtiga loo qabtay iney dhulkaas ku darsato kahor doorashada Mareykanka, maxaa yeelay doorashada kadib suuragal ma ahan inay xaqiijiso taageerada Washington ee qorshaha heshiiskii qarniga.”
Hadalka Eli Cohen ayaa imaanayo xili dalal badan oo carbeed ay bilaabeen in xiriir iskaashi la yeeshaan Israel waxaana dalalkaas carbeed hormuud u ah Sacuudiga iyo Imaaraatka.